Our founder, ဂျက်စီကာ Marks | USAHello အကြောင်း | USAHello
Jessica Marks founded USAHello (formerly the Refugee Center Online). သူမသည်လူတွေအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအသစ်သောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် tools တွေကိုအားပေးတော်မူပြီ.
Jessica Marks launched USAHello (formerly the Refugee Center Online) တွင် 2013. သူမသည်နှင့်အတူမူလကဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရင်းအမြစ်ကိုတည်ဆောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း-မပါဘဲမဆိုပေးဆောင်န်ထမ်းများ, နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမလစာနှင့်အတူ. ယနေ့တွင်အစီအစဉ်များ၏အရေအတွက်ကို, site ကိုဧည့်သည်, နှင့်ဝန်ထမ်းများကြီးထွားလာနေကြတယ်. ထက်ပိုပြီး 10,000 ကလူ၌အကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်နိုင်ငံသားနှင့် GED အတန်းထဲတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည် 2018. နီးပါးဝက်လူဦးရေသန်းထက်ပိုမိုကြည့်ရှုခဲ့ကြ2million USAHello pages.
သူမသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အပေါ်တစ်ဦးကျောင်းမှတိုင်ပင်စဉ်အခါဂျက်စီကာဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏လက်၌သူမ၏ပထမဆုံးဆဲလ်ဖုန်းကိုမြင်လျှင်. သူမသည်ဒုက္ခသည်များနှင့်အခြားရွှေ့ပြောင်း၏ဘဝအသက်တာ၌နည်းပညာ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်. သူမသည်တစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းကိုငါမြင်၏. ဂျက်စီကာမျက်နှာသစ် Self-ထိရောက်မှုကိုထောက်ပံ့သောအဆောက်အဦစနစ်များအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါသည်. သူမသည်နည်းပညာဒုက္ခသည်များရေရှည်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်နေ, အားလုံးအသိုင်းအဝိုင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ.
Before founding USAHello, ဂျက်စီကာကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုကမ္ဘာတဝှမ်းဒုက္ခသည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖူး, အာဖရိကပြောင်းရွှေ့လာသောလူနှင့်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းမှများအတွက်အစီအစဉ်များကိုမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အပါအဝင် (AIRF) နိုင်ငံ၏မြို့တော်, လူမှုရေးလေ့လာမှုများဆုံးမဩဝါဒပေး, နှင့်တိဘက်နှင့်ဘူတန်မှဒုက္ခသည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်. ဂျက်စီကာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဒုက္ခသည်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အတွက်တည်ရှိသည်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဘာသာရေးသည်းမခံ, နှင့် ကျေးလက်နေဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေး. သူမသည်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မာစတာရှိပါတယ်.
ဂျက်စီကာ Marks အကွောငျးဘာဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လို့ပြော
-Tej Mishra, ဘူတန်ကနေဒုက္ခသည်
အံ့သြဖွယ်များနှင့်မယုံနိုင်စရာအရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးကျေးဇူးတင်ပါသည်. သငျသညျငါပိုင်ကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေပြီ - Mohy Omer, ဆူဒန်ကနေဒုက္ခသည်
The USAHello website is unique from other refugee serving websites I've visited. ဒါဟာဘာသာပေါင်းစုံအရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းကြောင့်ပေးပါသည်သတင်းအချက်အလက်များလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါသည် - မျက်နှာသစ်, North Carolina ပြည်နယ်ရှိ
ငါသည်သင်တို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်-ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရနိုင်ဘူးဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့၏ GED လေ့လာမှုများအောက်ပါငါနဲ့ကျွန်မအလွန်ပျော်ရွှင်သည်သင်ခန်းစာခံစားမိပါတယ်ဘဝမှာအခက်အခဲများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင် - အလားအလာကောလိပ်ကျောင်းသား, နယူးယောက်
ငါဂျက်စီကာမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှတ်မိ. ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုသိပါသင့်ရဲ့အခွင့်အရေး webinars ဖွဲ့စည်း, နှင့်ဂျက်စီကာမျိုးစုံဘာသာစကားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနှင့်အတူကိုထောကျပံ့ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ကြောက်မက်ဘွယ်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့! ငါတကယ်ဂျက်စီကာနဲ့အလုပ်လုပ်ခံစား - အာဒံကမိုဟာမက်, ဘုရားကျောင်း World Service
ဂျက်စီကာထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ... သူမသည်ပိုပြီးအထူးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလူတွေကိုကူညီပိုမိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအလွန်ကြီးစွာသောနှလုံးဖြစ်ပါသည်, ဒုက္ခသည်များနှင့် သာ. ရှေးရှေးအဖြစ်ကောင်းစွာ - ဟာဆန်နှင့်. သမဂ္ဂ၏, ဒုက္ခသည်
တိုင်းအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ, အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးအနွယ်လည်းမရှိ. ဂျက်စီကာ, သငျသညျယနေ့ငါဖြစ်၏ဘယ်မှာဖြစ်ငါ့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြသူထိပ်အမျိုးသမီးများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ - Basma Alawee, အီရတ်ကနေဒုက္ခသည်
I am very happy to get access to resources like USAHello to help me study for my GED — Saint Fathiah, USAHello GED student
Jesse, သငျသညျရိုးရှင်းစွာငါသိရန်ခှငျ့ရခဲ့ကြပါပြီအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းဖြစ်ဖြစ်ပျက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. အတွက်တနေ့ကြောင်းကျပန်းအီးမေးလ်ပို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် 2012!
ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်နှစ်နှင့်ခြောက်လ US မှာခဲ့. ကျွန်မအတိအကျအခါ, တစ်ဦးကတူခံစားခဲ့ရသောအရာကိုစကားဖော်ပြလို့မရပါဘူး “အမေရိကန်” ငါပြန်ပြီးတော့တစ်ခုခုအကြောင်းကိုအသိပညာခဲ့လျှင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုထွက်ရောက်ရှိ. ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးထားကြောင်း၏ပထမဦးဆုံးအကြီးအခံစားချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်! ဒါကအလုံအလောက်ခဲ့သည်; ငါတကယ်ငါဟုဘာဂရုစိုက်မပြုခဲ့ “ဟုတ်ကဲ့” to when I agreed to join USAHello asaboard member. ငါသင်တန်ဖိုးထားခံရသည်ဟုခံစားရခြင်းပေးပြီလူများအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုတန်ဖိုးထားဘယ်လောက်သိကြမျှော်လင့်ပါတယ်!
Several metrics we’ve used to measure outcomes of the work we did together have indicated the greatness of what USAHello does. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုသင်သိရ, and the true value of what USAHello does goes much beyond what the metrics capture, ငါအတိတ်ဒုက္ခသည်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သည်ဟုဆို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့သောသင်၏အရူပါရုံကိုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအမှန်တကယ်ဖှယျဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်ခေတ္တကူးကြ၏အဖြစ်, သငျသညျဒုက္ခသည်တွေကိုပံ့ပိုးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဦးဆောင်ကြပါပြီ, သို့သော်သင်နည်းပြပါပြီ, ဒုက္ခသည်တစ်ဦးနောက်ခံထံမှအာဏာအပ်နှင်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားဤမျှလောက်များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီ. ငါသည်သင်တို့ကြောင့်ကြီးမားသောမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ripple ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ယခုအခါနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ. ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့၏အသစ်ကနိုင်ငံတွင်းရှိကောလိပ်နည်းလမ်းများတွေ့ပြီ, ပိုပြီးအများအပြားနိုင်ငံသားများဖြစ်လာပြီး, သင်သည်ထိုအရေးကြီးသောထင်ကြောင့်ဒေသအနှံ့ဆရာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကလေးများသင်ပေးဖို့နည်းလမ်းတွေသင်ယူနေကြသည်; သငျသညျအတူတူယူဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, နည်းပြ, တိုင်းပြည်အနှံ့ကနေမှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်ဦးဆောင်ပါရမီနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လူ.
I was asked to writeafew statements about early days at USAHello. သငျသညျငါ၏အကြံအစည်မှလာသည့်အခါတိုင်း, ငါသည်သင်တို့၏ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ (ငါတကယ်မြင်မပြုမီ) သငျသညျအလုပ်မလုပ်ခဲ့ကြရသောအခါ 24 hoursaday or so for USAHello, နှင့်သင့်အိမ်သူအိမ်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးခဲ့. သူများသည်ကနဦးနှစ်ပေါင်း’ bi-လစဉ်သို့မဟုတ်ဒါဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများ, လစဉ်ကော်မတီကအစည်းအဝေးများ, အသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များလမ်းညွှန်သင်ပြခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်, သငျသညျပွငျဆငျအားလုံးသော, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဦးဆောင်, သငျသညျအလုပ်များခဲ့ကြတူသောနှင့်နေဆဲမထင်ခဲ့ဘူး. နှင့်သင်တန်းကျနော်တို့ bi-အပတ်စဉ်၏လတ်ဆတ်တဲ့မှတ်ဥာဏ်စစ်ဆေး-In အစည်းအဝေးများဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်မှာရှိဘူး 2:00 ညနေ. လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလက်ခံရရှိဒုက္ခသည်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးဆရာ, ဆရာမများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ထို့နောက်-မသေချာမရေရာအတွေးအခေါ်များ, အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်ဒုက္ခသည်များအတွက်အရင်းအမြစ်စာရင်းပြုစု, အွန်လိုင်းမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ရှိခြင်း, နောက် ... ပြီးတော့, are now what USAHello is known for! သငျသညျကိုလူမြားကိုအကြောင်းပြချက်ပေးပြီတော့, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပါအဝင်, ဂုဏ်ယူဖြစ်!
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့အားလုံးကိုအသစ်ရောက်ရှိလာသောကိုယ်စားတွင်, ငါသည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့သင်ပြုသောင့်အဘယျသို့အဘို့အဦးတည်းအချိန်ပိုမိုချင်ပါတယ်! ဒါဟာငါကဲ့သို့သောလူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောသင်တို့ကဲ့သို့လူအပင်ဖြစ်သည်, နှင့်အကြောင်းရင်းများကြှနျုပျတို့သညျဤနိုငျငံတှငျပိုင်ကြောင်းကိုယုံကြည်ရန်.
ကျနော်တို့ကျိန်းသေတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုလက်လွတ်လိမ့်မယ်, Jesse!
Tej Mishra, ဘူတန်ကနေဟောင်းတဦးကဒုက္ခသည်